Mpanakanto sady manam-pahaizana momba ny mozikam-paritra manerana an’i Madagasikara manana ny marim-pahaizana « DEA en Ethnomusicologie », moa ny iray amin’ireo mpikambana, Rakotonavory Jimmy Hilarion. Araka ny fanazavana noho izany dia isan’ny mbola hampiavaka ny seho koa ny fampisehoana ireo voka-pikarohana amin’ny alalan’ny mozika. Hisongadina, ohatra, ny gadonkira tsimihety toy ny salegy, antosy, malesa, baoejy sy ny maro hafa hatramin’ny fampiarahana izany amin’ny hiran’ny tanora ankehitriny, raha ny fanazavana. Hiavaka noho izany ny ambiansy izay mbola tafiditra ao anaty fankalazana ny faha 15 taonan’ny tarika. Hisy ihany koa ny famoahana rakin-kira manokana mitondra ny lohateny hoe « Tsy manambady papoety » izay entin’ny tarika hanehoana ny tsy fankasitrahan’izy ireo ny firaisana amin’ny saribakoly na « poupée sexuelle » izay efa ezahan’ireo firenena mandroso hampidirina tsikelikely eto amin’izao tontolo izao.